Nanampy tranonkala vaovao any Azerbaijan, Portugal, Federasiona Rosiana, Espana ary UK ny Komitin'ny vakoka UNESCO
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanampy tranonkala vaovao any Azerbaijan, Portugal, Federasiona Rosiana, Espana ary UK ny Komitin'ny vakoka UNESCO
Nandritra ny fivoriany tao Baku io maraina io dia nanoratra toerana ara-kolontsaina enina tamin'ny lisitry ny vakoka eran-tany UNESCO miampy tranokala roa ireo vohikala vao nosoratana. Azerbaijan, Portugal, Federasiona Rosiana, Espana ary UK. Hitohy amin'ny tolakandro ny soratra.
Trano Fanjakanan'ny Mafra-Palace, Basilica, Convent, Cerco Zaridaina sy zaridaina mihaza (Tapada) (Portiogaly) - Any amin'ny 30 km avaratrandrefan'i Lisbonne no misy an'io tranonkala io dia noforonin'i King João V tamin'ny 1711 ho toy ny fisehoana mivaingana momba ny fihevitroany ny mpanjaka sy ny fanjakana. Ity tranobe quadrangular mamirapiratra ity dia misy ny lapan'ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy, ny trano fiangonana, miendrika basilika baroa romana, monasiteran'ny Franciscan ary tranomboky misy boky 36,000 XNUMX. Ny kompleks dia vitan'ny zaridaina Cerco, miaraka amin'ny endriny geometrika, ary ny zaridaina mihaza mpanjaka (Tapada). Ny Royal Mafra Building dia iray amin'ireo sanganasa mahatalanjona nataon'ny Mpanjaka João V, izay maneho ny hery sy ny ahatongavan'ny fanjakana Portiogey. João V dia naka modely momba ny maritrano sy ny artista baroque romana sy italianina ary zavakanto voatendry izay nahatonga an'i Mafra ho ohatra miavaka amin'ny Baroque Italiana.
Toerana masin'i Bom Jesus do Monte any Braga (Portugal) - Ilay tranokala, tontolon'ny kolontsaina hita eo amin'ny tehezan'i Mount Espinho, izay manatrika ny tanànan'i Braga any avaratry Portiogaly, dia manetsika an'i Christian Christian, mamorona tendrombohitra masina misatroka fiangonana. Ny fitoerana masina dia novolavolaina nandritra ny 600 taona mahery, tamin'ny fomba Baroque, ary maneho ny fomban-drazana eropeana amin'ny famoronana. Sacri Monti (tendrombohitra masina), natolotry ny fiangonana katolika tao amin'ny Council of Trent ao amin'ny 16th taonjato, ho setrin'ny Fanavaozana Protestanta. Ny ensemble Bom Jesus dia mifototra amin'ny a Lalan'ny Lakroa izay miakatra amin'ny lemaka andrefan'ny tendrombohitra. Ahitana andiana trano fiangonana izay misy sary sokitra mampiala ny Passion of Christ, ary koa loharano, sary sokitra sy zaridaina ofisialy. The Lalan'ny Lakroa miafara amin'ny fiangonana, izay natsangana teo anelanelan'ny 1784 sy 1811. Ireo tranobe vato granita dia efa nopetahana rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny vato. Ny tohatra malaza an'ny Five Sense, miaraka amin'ny rindrina, tohatra, loharano, sarivongana ary singa haingo hafa, no asa Baroque marika indrindra ao amin'ilay trano.
Fiangonan'ny sekoly Pskov an'ny Architecture (Federasiona Rosiana) - Fiangonana, katedraly, monasitera, tilikambo mimanda ary tranobe fitantanan-draharaha no mandrafitra izany toerana izany, vondrona tsangambato iray hita ao amin'ny tanàna manan-tantara ao Pskov, amoron'ny reniranon'i Velikaya any avaratra andrefan'ny Russia. Ny mampiavaka ireo tranobe ireo, novokarin'ny Sekolin'i Arkiteky Pskov, dia ahitana ny volan'ny toratelo, ny domes, ny lavarangana ary ny belfries, miaraka amin'ireo singa tranainy indrindra manomboka amin'ny 12th taonjato. Ny fiangonana sy ny katedraly dia tafiditra ao anatin'ny tontolo voajanahary amin'ny alàlan'ny zaridaina, rindrina manodidina ary fefy. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fomban-drazana Byzantine sy Novgorod, ny Pskov School of Architecture dia nahatratra ny tampony tamin'ny taonjato faha-15 sy faha-16, ary iray amin'ireo sekoly lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Nampahafantatra ny fivoaran'ny maritrano rosiana nandritra ny taonjato dimy izany.
I Risco Caido sy ny Tendrombohitra Masin'i Kolontsaina Kolontsaina Gran Canaria (Espana) - Any amin'ny faritra be tendrombohitra any afovoan'i Gran Canaria, dia misy hantsana, lohasaha ary fananganana volkano i Risco Caído ao anaty tontolo iankinan'ny harena voajanahary. Ny tontolo dia ahitana fipetrahana troglodyte be dia be - toeram-ponenana, tranom-bary ary lavaka famorian-drano - izay ny taonany dia porofon'ny fisian'ny kolontsaina talohan'ny fiteny Hispanika tao amin'ilay nosy, izay nivoatra nitokana, nanomboka tamin'ny fahatongavan'ireo Berber Africa Avaratra, tany am-piandohana amin'ny vanim-potoana iainantsika, mandra-pahatongan'ny Espaniola mpifindra monina voalohany amin'ny 15thtaonjato. Ny troglodyte complex dia misy koa lava-kavoana fivavahana sy tempoly masina roa, na almogarenes - Risco Caído sy Roque Bentayga - izay nanaovana lanonana ara-potoana. Ireo tempoly ireo dia heverina fa mifamatotra amin'ny kolontsain'ny kintana sy ny hoe "Earth Mother".
Jodrell Bank Observatory (Fanjakana Mitambatra Grande-Bretagne sy Irlandy Avaratra) - Any amin'ny faritra ambanivohitra avaratrandrefan'i Angletera, tsy misy fanelingelenana amin'ny radio, Jodrell Bank dia iray amin'ireo mpandinika ny astronomian'ny radio manerantany. Tamin'ny fiandohan'ny fampiasana azy, tamin'ny taona 1945, ny tranonkala dia nametraka fikarohana momba ny taratra kosmika hitan'ny akon'ny radara. Ity observatory ity, izay mbola miasa, dia misy teleskaopy radio maro sy tranobe miasa, ao anatin'izany ny trano heva sy ny Control Control. Banky Jodrell dia nisy fiatraikany ara-tsiantifika lehibe teo amin'ny sehatry ny asa toy ny fandalinana ny meteors sy ny volana, ny fahitana quasars, optika kuantum, ary ny fanarahana ny sambon-danitra. Ity ekipa teknolojia miavaka ity dia maneho ny fifindrana avy amin'ny astronomia optika nentim-paharazana ka hatramin'ny astronoma radio (1940 hatramin'ny 1960), izay nanjary fanovana tanteraka ny fahatakarana an'izao rehetra izao.
Ivotoerana manan-tantara ao Sheki miaraka amin'ny lapan'i Khan (Azerbaijan) - Ny tanàna manan-tantara an'i Sheki dia eo am-pototry ny Tendrombohitra Greater Caucasus ary mizara roa amin'ny Ony Gurjana. Raha miorina eo an-tendrombohitra ny tapany avaratra kokoa, ny lafiny atsimo dia miitatra mankamin'ny lohasahan'ny ony. Ny afovoany manan-tantara, namboarina taorian'ny fandravana tanàna teo alohan'ireo fotaka tao anatin'ny 18th taonjato, dia miavaka amin'ny ensemble nentim-paharazana trano misy tafo matevina avo. Miorina amin'ny làlam-barotra manan-tantara manan-danja, ny maritrano ao an-tanàna dia voakasiky ny lovantsofina fananganana Safavid, Qadjar ary Rosiana. Ny lapan'i Khan, any avaratra avaratry ny tanàna, ary trano mpivarotra maromaro, dia taratry ny harena ateraky ny fiompiana kankana sy ny varotra cocoons vita amin'ny landy tamin'ny faramparan'ny 18th ho an'ny 19th taonjato maro.
Ny kaompaniam-bola Saodiana dia naka ny Airbus, mitentina 5.9 miliara dolara ho an'i Boeing